Ukusebenzela i-PCAnywhere Bug nge Vista | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 7, 2008 ULwesihlanu, July 10, 2009 Douglas Karr
Angibonanga i-LiveUpdate noma imibhalo kule bug, kepha ngokusobala iyathinta nabanye abasebenzisi be-PCAnywhere Vista. Kunokuba ulinde Symantec ukuze ngithole ukulungiswa, ngithole ukuthi injini yokunikezela, iWinawe32.exe idala inkinga.
Qhafaza kwesokudla kubha yomsebenzi wakho bese ukhetha i-Task Manager.
Khetha Izinqubo ithebhu.
Gqamisa i-Winawe32.exe bese uqhafaza Qeda Inqubo.
Uma uxwayiswa, chofoza Kulungile.
Vala i-PCNoma kuphi.
Phinda uvule i-PCNoma yikuphi futhi kufanele ubone wonke ama-Remotes akho manje.
Kungaba kuhle uma ISymantec ilungise le bug nge-PCAnywhere, kubuhlungu ngempela.
Tags: androidamakhadiubbeizinto zokwenyusa umcimbithola ama-akhawunti we-twitterumkhakha weselulaukukhangisa ongaphandleusb ushayela
Aug 22, 2008 ku-5: 48 AM
Udaba lulungisiwe ku-pcNoma ikuphi i-12.5. Manje njengamanje ku-beta ku http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
i-pcNoma yikuphi umphathi (winaw32.exe) wethula iSessionController.exe. Uma izikhathi ze-winaw32.exe ziphuma ngaphambi kokuthi i-sessioncontroller.exe ilayishe, lokho kuba umphumela kusikrini esingenalutho. Lokhu kungenzeka uma isistimu imatasa ngesikhathi i-pcaw32.exe iqalisa.
Uma lokhu kwenzeka ngokungaguquguquki, bese uzama ukwethula iSessionController.exe kuqala, linda imizuzwana embalwa bese uqalisa umphathi we-pcAnywhere. Lokhu kufanele kusebenze.
Sep 16, 2008 ku-6: 36 AM
Le nkinga ihlelwe ku-pcAnywhere version 12.5 beta release.Ungazama lesi simo noma ngabe uhlelo lwakho lumatasa.
Sep 28, 2008 ku-10: 49 AM
Ngakho-ke, i-12.1 engiyikhokhele ayisebenzi, futhi akukho lapho kukhulunywa khona ngesiqeshana esitholakala ku- symantec.com. Ake ngiqagele, inguqulo engu-12.5, iyatholakala, uma ufuna ukukhokhela umkhiqizo futhi, futhi okwamanje, ulahlekelwe amakhasimende. I-PcNaphi lapho, eminyakeni eminingana edlule, iphenduke isiqeshana semfucumfucu, uhlelo lokuhlola kanye nokuhlola, ukungabi nobunikazi nokuziphendulela kusobala kakhulu kumuntu onjengami ofake ikhodi ngezilimi ezi-8 ezahlukahlukene futhi esekela izindlela zokuziphilisa.
I-Oct 22, i-2008 ku-4: i-57 PM
Inkampani yethu isebenzise i-pcAnywhere ekuphathweni okukude cishe iminyaka engamashumi amabili manje. Izimbungulu ezinguqulweni zakamuva (11.0 nangaphezulu) bezilokhu zikhungathekisa kakhulu, futhi sithole ukuthi inguqulo ye-Enterprise yeRealNNC yenza umsebenzi ofanayo, isebenzisa izinsiza ezingaphansi kohlelo, ngemali encane ngokufaka ngakunye… futhi ayinakho ukucasuka yokukwazi ukusingatha iseshini eyodwa ngasikhathi.
Ukucacisa: Kusetshenziswa isici se- “Call Remote” se-pcNoma ikuphi lapho umphathi ebopha iklayenti, ngokuthi lelo Remote elifanayo alikwazi ukuba nababungazi ababili “abalibize” ngasikhathi sinye. Ukuba yikhodi yenethiwekhi, lokhu akunangqondo kimi. I-VNC ayinayo le nkinga, futhi ibonakala “isebenza nje”, ngisho nasemishinini i-pcAnywhere engeke ifake kuyo.
Uhlobo lwe-Enterprise lweRealVNC lusebenza kuVista ngaphandle kwezinkinga, noma ngabe uhlobo lwamahhala oluthi “host” alunakusebenza njengenkonzo kuVista (ilalela kahle nje, kepha isetha kabusha kabusha ukuxhumana ngaso sonke isikhathi lapho uxhuma). Ngaphezu kwalokho, i-VNC iyi-cross-platform futhi isebenza "ngaphandle kwebhokisi" ezindaweni zeLinux eziqhakazile, kanti i-pcNoma ikuphi abasingathi bangasebenza kuphela iWindows (tm).
Hawu, lokhu kuzwakala njengepulagi. Kodwa-ke, angihlobene neRealVNC nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kokuba yikhasimende elinelisekile, ngemuva kokuthi amaphutha we-pcAnywhere kanye nama-quirks asiphoqe ukuthola omunye umkhiqizo wokuphatha okude. Sisasebenzisa i-pcNoma ikuphi kusisekelo samakhasimende ethu afakiwe, kepha asithengi noma yimaphi amalayisense amasha kubo.
Feb 11, 2009 ngo-12: 53 AM
Kuhle, izinhlobo zangaphambi kuka-12.1 bezingasebenzi ku-Vista, ngakho-ke ngithenge i-12.1. Ngithole ukuthi asikho isichibi se-12.1, empeleni, angicabangi ukuthi i-12.1 isasekelwa ngisho, yize ibisemakethe hhayi kudala, kepha wamukelekile ukuphuma ukhokhele enye inguqulo engu-12.5 manje.
Mar 16, 2009 ku-7: 36 AM
mab, kufanele ukwazi ukuthola i-12.5 mahhala. Ukuvuselelwa okungakhulisi inombolo yenguqulo enkulu (engu-12) kuvame ukuba mahhala. Kuzodingeka ukuthi uxhumane nokwesekwa kwabo kepha, kubuhlungu kepha ngithuthukise i-12.0 iye ku-12.1 ngale ndlela.
Sep 24, 2009 ngo-5: 05 PM
Ngisho i-12.5 i-flakey. Kufanele ngibe sezingeni eliphansi lezindlela ezikude ze-garphic ukuze ngiqale noma ngithembeke ekugcineni ukuxhumana. Ngilinde nje isikhathi esithile futhi ngizohlola i-VNC esikhundleni sayo. I-PCA manje isifile ngokwami. Kubukeka sengathi iSymantec ayiyisekeli futhi ayinendaba nayo.
Uma kukhona owaziyo nganoma isiphi isibuyekezo seSymantec PCA, iphakethe lensiza, njll ku-12.5 ngiyaqiniseka ukuthi ngithanda ukwazi ngakho.